8.2 Fanovana ireo zavatra an-tsoratra - Geofumadas
Avy ao amin'ny toko 16 dia miatrika lohahevitra izay misy ifandraisany amin'ny fanontana ireo sary. Na izany aza, tsy maintsy jerentsika eto ny fitaovana azo ampiasaina amin'ny fanovana ireo zavatra izay novolavolainay, satria ny toetrany dia tsy mitovy amin'ny zavatra hafa. Araka ny ho hitantsika aoriana, dia mety ho liana amin'ny fanitarana tsipika iray isika, manaloka ny sisin'ny volkano, na mandroso tsikelikely. Saingy raha ny tranga ara-pitaovana dia mety hipoitra avy hatrany ny filàna ny fanovàna azy ireo aorian 'ny famoronana azy, noho izany dia tsy maintsy manazava izany isika mikasika ny fanitsiana ireo olana raha te-hitazona ny fitsipika ara-teknika mikasika ny fandehanana avy amin'ny tsotra mankany amin'ny ary mampifandray ireo olana amin'ny alalan'ny fifandraisana ao aminy. Andao hojerena
Raha tsy maintsy manova ny andinin-tsipika isika, dia azontsika atao ny mamerina indroa eo amin'ny lahatsoratra, na manoratra ny baiko "Ddedic". Rehefa mampihatra ny baiko, i Autocad dia mangataka antsika hanondro miaraka amin'ny boaty fisafidianana ilay zavatra tokony havaozina, amin'ny fanaovana izany, dia hamboarina amin'ny faribolana iray ilay zavatra ary miaraka amin'ilay kofera mba hahafahantsika manova ny lahatsoratra amin'ny fomba mitovy amin'ilay ataontsika amin'ny fanaovan-jotra rehetra. amin'ny teny. Raha roa notsindrio roa tamin'ny totozy ianao, avy eo dia tonga any anaty boaty fanovana izahay.
Ao amin'ny tabilao "Text" an'ny tabilao "Annotate" dia manana bokotra roa isika izay manova ny tsipika iray. Ny bokotra "Scale", na ny fitovizany, ny baiko "Text scale", dia ahafahanao manova ny haben'ny lahatsoratra maromaro amin'ny dingana iray. Ho hitan'ny mpamaky tsy ho ela fa saika ny fanovana rehetra, tahaka an'ity, ny zavatra voalohany nanontanian'i Autocad antsika dia ny manondro zavatra na zavatra hanovana. Hanjary zatra anao koa ianao, raha vao aseho ireo zavatra ireo dia hamarana ny fisafidianana isika miaraka amin'ny lakile "ENTER" na ny bokotra totozy havanana. Amin'ity tranga ity dia afaka misafidy andalana lahatsoratra iray na maromaro isika. Manaraka, tsy maintsy manondro teboka fototra iray iakarana isika. Raha manosika ny "ENTER" isika, tsy misafidy, dia ny fampidirana isaky ny andian-tsoratra no ampiasaina. Ary farany, mila manana safidy efatra hanovana ny habe amin'ny varavarankely baiko isika: ny haavon'ny vaovao (izay safidy voafidy), dia manondro ny haavon'ny taratasy (izay miantefa amin'ny zavatra an-tsoratra misy fananana an-taonany, izay hianarantsika. taty aoriana), lalao hifototra amin'ny lahatsoratra efa misy, na asongadiny ny marika. Araka ny hitantsika tao amin'ny horonantsary teo aloha.
Amin'ny lafiny iray, ny bokotra "Manamarina", na ny baiko "Textjustif", dia ahafahantsika manova ny teboka fametrahana ny soratra raha tsy mihetsika eo amin'ny efijery. Amin'ity tranga ity, ny safidy ao amin'ny varavarankely baikon'ny baiko dia mitovy amin'ny nasehontsika teo aloha, ary noho izany, ny mitovy amin'ny fampiasana azy ireo dia mitovy. Na izany na tsy izany, andao jerena io safidy fanovana io.
Mandraka ankehitriny, angamba ny mpamaky dia efa nahatsikaritra ny tsy fisian'ireo singa izay ahafahanao misafidy karazana karazana taratasy avy amin'ny katalazana malalaka izay mazàna an'ny Windows, ary koa ny tsy fisian'ny fitaovana hametrahana fahasahiana, italy, sy ny sisa. Ny mitranga dia ny fahazoan-dàlana ireto dia mifehy an'i Autocad amin'ny alàlan'ny "Styles Text" izay ho hitantsika manaraka.
Previous Post«Previous 8.1.1 Sava amin'ny lahatsoratra
Next Post 8.3 Text Stylesmanaraka »